Safiirkii hore u Fadhiyey Somalia Dawlada Maraykanka Ayaa Dalkiisa Usoo jeediyey Inay Aqoonsato Somaliland+Fashilka Muqdisho oo Soo Bandhigay. |
Safiirkii hore u Fadhiyey Somalia Dawlada Maraykanka Ayaa Dalkiisa Usoo jeediyey Inay Aqoonsato Somaliland+Fashilka Muqdisho oo Soo Bandhigay.
Hargeisa(GNN):-Safiirkii Dawladdii Maraykanka u fadhiyey Dalka Soomaaliya Sanadihii u dhaxeeyey 2016 ilaa 2017, Amb. Stephen M. Schwartz, ayaa Dawladdiisa u soo jeediyey inay Qunsuliyad ka furato Somaliland.
Amb. Stephen M. Schwartz oo qoraal dheer qoray ayaa waxa kale uu Dawladdiisa u soo jeediyey inay Midowga Afrika kala shaqayso sidii loo dhisi lahaa meeqaamka Somaliland iyo in Madaxweynaha xiga Farmaajo ee Soomaaliya uu sameeyo Wada-hadallo midho-dhal ah oo uu la yeesho Somaliland.
Amb. Stephen M. Schwartz oo Arrimahaa ka hadlayaana ayaa yidhi “Masaafadda iyo inay ka fog tahay Muqdisho, Maraykanku waa inuu Somaliland ka samaystaa Qunsuliyad, si ay u caawiso muwaaidniinta Maraykanka, Ganacsiga iyo in la dhiso xidhiidhada balaadhan.”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ku daray “Waa inay sidoo kale kala shaqaysaa midowga iyo dhinacyada kaleba in la xalliyo meeqaamka Somaliland, iyadoo Madaxweynaha soo socda ee Soomaaliya (Madaxweynaha kan xiga) lagu dhiirigelinayo inuu sameeyo Wada-hadallo deg-deg ah oo macno leh.” waxaanu intaa raaciyey oo uu ka hadlay “Degannaanshaha Somaliland iyo halka ay ku taallo, gaar ahaan dekedda Berbera waxay Maraykanka siin kartaa xulaashooyin istaraatiijiyadeed oo faa’iido leh, laakiin waa haddii ay Somaliland yeelato sharci caalami ah oo lagaga wada xaajoodo heshiisyada.”
Warbixintan ayaa si Qotodheer u Lafo gurtay hanaanka Dawlanimo ee Somalia iyo Qaabka Madaxweyne Farmaajo Ula macaamilay Maamul Goboleedyada.
Sannadihii ugu dambeeyay, dadka Soomaaliyeed waxay la kulmeen dhibaatooyin xagga miisaanka kitaabiga ah, macno ahaan. Dagaal, belaayo, abaar, ayax, daadad, iyo saboolnimo.
In ka badan 80 boqolkiiba dadka ayaa ka yar da’da 35, heerka shaqo la’aanta ku dhowaad 70 boqolkiiba. laakiin Soomaaliya nasiib uma ay helin Hogaamin wanaagsan iyo dawlad deyr uga noqota arrimahaasi ka jira. Madaxweyne Farmaajo afartii sano ee uu xilka hayey waa uu kufashilmay hoggaankiisa wuxuu Soomaaliya kadhigay mid aan xasilin midna.
Halkii uu si Wanaagsan ah ula shaqeyn lahaa madaxweynayaasha shanta dowlad-goboleed ee xubnaha ka ah Federaalka (FMS, ama “gobolada”), wuxuu qaatay fursad kasta oo uu ku wiiqayo ama isku dayayo inuu ku xakameeyo.
Waxa dhacay Hal kiis, wuxuu u xidhay eedeymo been abuur ah lagu xidhay masuul ka tirsan maamul goboleed.
doorashada dowlad goboleedka Koonfur-galbeed. Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa la doortay inkasta oo uu Farmaajo diidanaa kana soo horjeeeday.
Wada shaqeyn la’aantaan iyo niyad wanaagan La’aan ayaa curyaamisay horumarka Soomaaliya.
Madaxda FGS iyo FMS waxay ku guuldaraysteen inay ku heshiiyaan waajibaadka ka saaran amniga dalka, cusboonaysiinta iyo ansaxinta dastuurka, iyo in ay wax horumar ah ka gaadhaan wada hadalada Somaliland.
Farmaajo ayaa xilkii ka qaaday ra’iisul wasaarihiisii ​​ugu horreeyay muddo 3.5 sano ah xilka hayey, xilligaas oo ay dowladdu hagaajisay maareynta maaliyadda dowladda,
iyadoo si jismi ah u diiwaangalisay dhammaan xubnaha millatariga iyo booliska, ayna sameysay mushahar elektaroonig ah.
Nasiib darrose, Farmaajo wuxuu baarlamaanka ka dhaadhiciyay inay eryaan ra’iisul wasaaraha bishii Luulyo 2020, iyadoo la sheegay inuu isku dayay inuu la heshiiyo dowlad goboleedyada.
Dhanka Siyaasadda arrimaha dibedda, Madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibkiisa ugu Weyn, taliyaha sirdoonka dalka Hay’ada Nisa, waxay ka faa’iideysteen malaayiin doolar oo la sheegay inay bixisay Qatar, oo soosocotay 2017 ilaa 2020, taas oo ah ta barakicisay Imaaraatka oo ah kaaliyaha dhaqaale ee ugu horreeya ee DFS.
Lacagtaasi waxay sii hurineysaa musuqmaasuqa siyaasadeed waxayna dalka ka dhigeysaa mid diyaar u ah tartanka saamaynta ee u dhaxeysa dowladaha Khaliijka Carabta.
Farmaajo wuxuu doortay inuu jabiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya deriska la ah Soomaaliya iyo inuu ciidan u diro gobolka Gedo ee Jubaland, halkii uu kala hadli lahaa wixii kala duwanaanshaha Kenya ee ku saabsan soohdinta badda ee ay ku muransan yihiin, ku lug lahaanshaha gobolka xadka ee Jubaland, iyo la dagaallanka al-Shabaab.
Soomaaliya waxaa loo qorsheeyay inay qabsoonto doorashadeeda afartii sanaba mar la qabto baarlamaanka iyo madaxweynaha bilaha Febraayo iyo Maarso 2021, siday u kala horreeyaan. Hoggaamiyeyaasha Soomaalida ayaa ku heshiiyay bartamihii sannadka 2020-ka, diyaargarowguna wuxuu ahaa mid gaabis ah oo muran badan dhaliyay.
Ku dhowaad tobaneeyo musharrax oo la tartameysa Farmaajo ayaa ku hanjabay inay qaban doonaan doorasho barbar socota xukuumada, haddii DFS aysan horumarin kalsoonida hannaanka Qabsoomida Doorasho Xor ah. Qaar ka mid ah dalabyada muhiimka ah ayaa ahaa ka saarida shaqaalaha rayidka ah, oo ay ku jiraan shaqaalaha Hay’ada Sirdoonka ee NISA,
waxa laga doonayo inay noqdaan dhexdhexaadinta guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed
iyo Sidoo kale ka bixitaanka ciidamada federaalka ee Gedo, si Jubaland ay u maamuli karto howlaheeda doorashada iyada oo aan aaney faragelin DFS.
Talada uu Safiirkani u Jeediyey Madaxweynaha Cusub ee maraykanka ayaa ahayd sidan.
Maamulka Biden waa inuu si dhakhso leh dib ugu eego guud ahaan danaha Mareykanka ee Soomaaliya iyo inuu sameeyo siyaasad cusub.
Siyaasaddu waa inay aqoonsataa in amni-darrada Soomaaliya ay ka timid fashilka dowladnimada iyo in “dhibaatooyinka siyaasadeed iyo kuwa hogaamineed ay u baahan yihiin xalal siyaasadeed iyo dowladnimo,
” sida ay sheegtay Elizabeth Shackelford. Hadafka waa lagu guuleysan karaa. Hay’ado badan oo Soomaali ah – ganacsato ay kamid yihiin shirkadaha Hormuud iyo Dahabshil iyo dawlada Somaliland iyo Maamul goboleedka Puntland – waxay u shaqeeyaan si wax ku ool ah;
Muwaadiniinta Soomaaliyeed wax ugama qalmaan dowladahooda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah.
Isbedel Muuqda wuxuu ku xidhnaan doonaa hogaaminta cusub ee Soomaaliya oo sameysa horumar muuqda oo lagu dhisayo hay’ado karti leh isla markaana si wax ku ool ah oo lala xisaabtamo wax ugu xukuma. Taas bedelkeeda, Mareykanka wuxuu xoojin lahaa ka qeyb qaadashada arrimaha diblomaasiyadda, kordhinta iyo dardargelinta kaalmooyinka horumarinta, iyo dib u soo nooleynta iskaashigiisii ​​xagga amniga si looga caawiyo Soomaaliya inay gaarto xasillooni ballaaran iyo isku-filnaansho. Haddii hoggaamiyeyaasha Soomaaliya ay ku guuldareystaan ​​inay horumar ka sameeyaan dhismaha hay’ado wax ku ool ah oo lala xisaabtami karo, Mareykanka waa inuu joojiyaa taageeradiisa diblomaasiyadeed iyo horumarineed isla markaana uu ku xaddido faragelinta kuwa ka ilaaliya dalka hooyo iyo danaha muhiimka ah ee Mareykanka.